Orinasa DHL sy ny mpanao gazety Niara-nikorana tamin’ny alalan’ny « after work »
Niara-nifaly tetsy Ankorondrano ireo tompon’andraikitry ny orinasa DHL Madagascar sy ireo mpanao gazety maro tamin’ny faran’ny herinandro teo.
Zava-dehibe loatra ny eo amin’ny lafiny serasera hampahafantarana ny asa iandraiketan’ny DHL, hoy ny Tale jeneraly, Yves Andrianaharison. Tena mety ary rariny raha mba misy fotoana iarahana mifaly tahaka izao, hoy hatrany ny tenany. Nilaza ihany koa ny Tale jeneraly fa mbola maro ny asa miandry hiarahana amin’ity taona 2020 ity ka tsara raha santarina amin’ny zavatra mahafinaritra tahaka izao. Tonga nanafana ny fotoana tamin’io zoma alina io moa i Inah ary nihanoka tanaty mozika tanteraka ny rehetra ka tena nalai-nisaraka.